Amụma nzuzo- IntoKildare
Iwu Kuki chọrọ weebụsaịtị iji nweta nkwenye n'aka ndị ọbịa ịchekwa ma ọ bụ weghachite ozi ọ bụla na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Iwu Kuki na -enyere aka kpuchido nzuzo nzuzo dị n'ịntanetị, site n'ikwe ka ndị ahịa mata ka esi achịkọta ma jiri ozi gbasara ha n'ịntanetị. Ndị ahịa nwere ike họrọ inye ohere kuki ma ọ bụ.
Ebe nrụọrụ weebụ a na -akwado Iwu Kuki site na igosipụta mmapụta na -eme ka ị mara gbasara kuki. Site na ịpị 'Enwetara m ya!' ị na -anabata ojiji nke kuki na saịtị a. Ị nwere ike ịgbanwe ikikere kuki n'oge ọ bụla site na ịga na Ntọala Nchọgharị gị. Ọ bụrụ na ịhọrọ gbanyụọ kuki, ụfọdụ ọrụ weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Nchịkọta Ozi & Jiri
Usoro anyị na-edekọ ma dekọọ adreesị IP gị, ụbọchị na oge nke nleta saịtị, ibe ndị eleta, ụdị ihe nchọgharị na ozi kuki. A na -eji data a naanị tụọ ọnụọgụ ndị ọbịa na saịtị ahụ, a gaghị eji ya mata gị.
Ndị ọbịa nwere ike kpebie izipu email site na saịtị nke enwere ike ịgụnye ozi nkeonwe. A na -eji ozi dị otu a naanị iji mee ka nzaghachi dabara adaba.
A na -anakọta ozi amata onwe gị n'ụdị kọntaktị ngwa ngwa. Anyị ga-eji ozi a zaghachi arịrịọ gị ma kpọtụrụ gị gbasara ọrụ anyị ga-emetụta nke a.
A na -anakọta ozi ndị ahịa niile dị ka aha, adreesị na ozi email maka nhazi nhazi, ọ nweghịkwa ọnọdụ ọ bụla a ga -ewepụta ya na isi mmalite nke atọ.
Ịkpọtụrụ IntoKildare.ie gbasara kuki
Ijide nzuzo nke ozi gị dị anyị mkpa nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu gbasara omume nzuzo anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kildare Fáilte, Ulo nke 7, Aras Chill Dara, Ogige Devoy, Naas, Co Kildare